Kuleylka kulul ee North Carolina Fair wuxuu dilayaa 2 Dadka ka dib markii uu ku faafay 134 cudurka Legionnaire - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Kuleylka kulul ee North Carolina Fair wuxuu dilayaa 2 Dadka Ka dib markii uu ku faafay 134 cudurka Legionnaire - BGR
Bandhig carwada ah oo lagu qabtay Carwada Gobolka Waqooyiga Carolina ee Waqooyiga Carolina ayaa sababaya in ka badan 100 kiis oo ah cudurka loo yaqaan 'legionellosis' inuu soo baxo wax yar ka dib dhacdada. Cusboonaysiinta mid warsidaal ay daabacday Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Bulshada ee North Carolina tirakoobyo la yaab leh ayaa la soo saaray.
Ilaa hadda, 134 kiisaska la xaqiijiyay waa lala xisaabtamay. Dhammaan dadka ay saameeyeen waxay aadeen carwada waxayna u badan tahay inay u lugeeyeen meel ku dhow fagaaraha si loo neefsado dhibacyo yaryar oo biyo ah oo hawada laga joojiyay. Kiisaska '88' waxaa ka mid ahaa hal isbitaal oo laba qof ayaa u dhintey cudurkooda dartood.
Cudurka loo yaqaan 'Legionnaires' waa jeermis ku dhaca bakteeriyada Legionella sambabbada, soo saaridda astaamo la mid ah kansarka oo u noqon kara mid culus. . Haddii uu cudurku sii bato, astaamo aad u daran, sida lallabbo iyo matag, ayaa laga yaabaa inay dhacaan, iyo astaamo faafa oo sidan oo kale ah, dhimashadu maahan wax aan caadi ahayn.
Saraakiisha caafimaadku waxay soo gabagabeeyeen in soo bandhigida dalku ay inta badan sabab u tahay xaqiiqda ah in aan sabab kale oo ku habboon la heli karin. Spas waxaa badanaa loo aaneeyaa faafitaanka bakteeriyada Legionella maxaa yeelay microorganisms wuxuu ku barwaaqoobi karaa bey'adaha noocan oo kale ah iyo ceelasha ay soo saareen taangiyada si fudud ayaa loo neefsan karaa.
"Natiijooyinka faafa ee horudhaca ah iyo deegaanka ayaa sheegaya in bakteeriyada Legionella ay ka dhacday Xarunta Davis Event Center ee WNC Ag Center, gaar ahaan meel u dhow spas iyo shantii maalmood ee la soo dhaafay." Spasku waa il si habeysan loo habeeyey u-helidda biyo-soo-celinta hawada waxayna la xiriireen faafidda cudurka legionella ee heerarka qaran iyo kuwa caalamiga ah. Natiijooyinkaani waxay hoosta ka xarriiqeen muhiimadda ay leedahay daryeelidda aaladda biyo qaboojin kara. "
Saraakiisha caafimaadku wali si dhow ayey u daawanayaan cudurkan waana suuragal in tirada cudurrada la xaqiijiyay ay kordhaan. Haddii aad ka soo qaybgashay dhacdada oo aad xanuun dareento, waxa habboon in dhakhtar la soo xiriiro isla markaaba.
Isha Sawirka: Sipa / Shutterstock
Waxay qaadataa tobanaan sano in polystyrene ay ku tarmaan xitaa qoraxda tooska ah - BGR
Saynisyahannadii hore ee NASA waxay yiraahdeen waxaan ku aragnay nolosha Mars dhexdeeda sannadihii 1970 - BGR